IPhone 6s Plus Camera vs Galaxy S7 Ayaa guuleysta? | Wararka IPhone
Kaamirada Galaxy S7 ayaa aad uga badan ta iPhone 6s Plus
Qolka Ignatius | | Tartanka, iPhone 6s Plus
Waxyar oo yar oo ka mid ah Actualidad iPhone ayaan daabacaynaa isbarbardhigyada kaladuwan ee udhaxeeya aaladaha hada matalaya dhamaadka-sare ee taleefanka maanta. Galaxy S7-ka cusub, oo aan horey idiinku soo bandhignay astaamaha ugu waaweyn ee uu isbarbar dhigay iPhone 6s, ayaa waxaa soo food saaray dhibaatooyin kala duwan. hoos u dhig imtixaannada e quusin.
Marka la barbardhigo ka soo dhaca isla joogga, ka IPhone 6s Plus wuxuu cadeeyay inuu ka xoog badan yahay kana naxsan yahay Galaxy S7. Dhinaca kale, marka la eego iska caabbinta biyaha, dabcan S7 waxay haysaa dhibaato la'aan iyadoo ay ugu wacan tahay ilaalinta IPX 68. IPhone, dhanka kale, wuxuu awood u leeyahay oo keliya inuu qabto 15 daqiiqo, taas oo taleefan aan lahayn shahaadadaas wax xun ma aha.
Laakiin mid ka mid ah tijaabooyinka ugu muhiimsan ee aynaan weli awood u yeelan inaynu aragno maanta ayaa ah tayada kamaradaha labada aaladood. Mid ka mid ah isbarbardhigga oo xiisaynaya dhammaan isticmaaleyaasha. Xaaladaha badankood, haddii aysan ahayn dhammaantood, iPhone had iyo jeer wuxuu cadeeyay inuu aad uga horreeyo Samsung in kasta oo dadka Kuuriya ay soo saareen qalabkan dhawr bilood ka dib iPhone.
Laakiin markan, waxay u muuqataa taas Samsung iyo kamaradeeda cusubi waxay ku guulaysteen inay dhaafiyeen kamaradii iPhone 6s, Kaamiro cusub oo 12 megapixel ah oo sida laga soo xigtay khubarada aysan u fiicneyn sida tan iPhone 6. Kaamirada cusub ee Samsung Galaxy S7 waxay isticmaashaa tiknoolajiyadda Duel Pixel oo noo oggolaaneysa inaan soo qabanno 1,4 um pixels oo na siinaya dhalaal illaa 95 % ka sareeya. Sidoo kale, dareemahan cusub leeyahay furitaan f / 1,7 si sawirada aan ku qaadno iftiin yar ay u soo bandhigaan natiijooyin wanaagsan.
Fiidiyowga ugu sarreeya wuxuu na siinayaa isbarbardhig u dhexeeya calaamadaha hadda jira ee Apple iyo Samsung. Khabiir kuma noqonayso inaad hubiso sida ay tahay Kaamirada cusub ee Samsung ayaa kun jeer u jeesaneysa iPhone 6s Plus, fiiqan, cad, xawaaraha diirada, midabka ... xitaa waxaan dhihi lahaa sidoo kale codka fiidiyowyada ay duubeyso.
Aan rajeyno in Apple ay sifiican uga fiirsato hagaajinta in Samsung ay ku dartay kamaradeeda cusub iyo in bilo yar gudahood, ay ku bilaabi karaan iPhone 7 iyaga oo wata sawir tayo sare leh kan Galaxy S7, kaas oo, sida aad ku aragtay fiidiyowyada, uu aad u fiican yahay, haddii aanu fiicnayn .
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 6s Plus » Kaamirada Galaxy S7 ayaa aad uga badan ta iPhone 6s Plus
Waan ogahay in kamarada Samsung ay buuxinayso midabada, kuwa iPhone 6s ka dhigaysa mid dhab ah, tanina waxaa ii sheegay asxaabtayda oo ah taageerayaasha Samsung, intaa waxaa sii dheer furitaanka kamaradu waa ka fiicantahay maxaa yeelay waxay qabataa waxyaabo badan iftiin ka yimid iphone 6s
Sida laga soo xigtay Rafael, midabbada ayaa si muuqata uga muuqda S7, taas macnaheedu maaha inay ka macquulsan yihiin. Tani waxay si gaar ah looga ogaan karaa banaanka cawska. Gudaha gudaha gudaha waxaad ku arki kartaa boodhka xoogaa sidoo kale, maxaa yeelay wuxuu yidhi S7 waxay u muuqataa sifiican marka ay jirto 0 faahfaahsan hooska shaatiga madow. Waxa aan jeclahay waa xagasha furitaanka weyn ee Samsung
Uma arko Samsung si ka wanaagsan, waxay ku sii badan yihiin faahfaahin yar, meelaha mugdiga ah hubaal waxay la soo bixi doonaan dhalaal dheeraad ah
Jawaab ku bixi Marco Aurelio
S7 miyaanay ahayn inuu hal talaabo ka horeeyo 6s plus? sug iphone 7 inuu soo baxo….
Weli waa inay maraan S6
miyayna ahayn in lala barbar dhigo iphone 7 markuu soo baxayo?
Ku jawaab Seba Lopez
Waa la isbarbar dhigi doonaa laakiin xilligan la joogo isbarbardhig kale oo suurtagal ah ma jiro.
Sidoo kale, laga bilaabo isla saldhigga, dadka isticmaala Samsung waxay dhihi doonaan waa in lala barbardhigaa Galaxy S8. Waa cadaawaha dabadiisa qaniinaya.
Maaha sababta oo ah xaqiiqda tartankeeda jiilalka waa 6s tan iyo markii 7 soo baxayaan ilaa dhamaadka sanadka sida caadiga ah halka Samsung cusubi soo baxayo dhawr bilood ka dib iPhone.
Jolin sawirka ugu horeeya wuxuu umuuqdaa inay adeegsadeen iPhone 3GS halkii laga isticmaali lahaa 6S
Ku jawaab kiwuito
Waxaan haystaa 6s iyo lab waxay umuuqataa inay xanuunsantahay in S7 uu kafiican yahay, taas oo caadi ah maadaama ay cusubtahay.
cudurdaarrada aad sameysid ee aadan u aqoonsan waa wax lagu qoslo
Waxaan u maleynayaa in ka shaqeynta iyo xaqiiqada iPhone 6s ay ka sarreyso S7, maxaa yeelay Samsung waxay sii wadaa inay buuxiso midabada waana laga dareemi karaa wixii ka sarreeya sawirka ubaxa, halkaasoo S7 uu ka wanaagsan yahay 6s xaaladaha iftiinka yar, ee sawirka ugu horeeya, Waxaa la arkaa in S7 uu ka buuq yar yahay oo uu sifiican u muuqdo, taas oo ay ugu wacan tahay furitaanka dareeraha oo iftiin badan qabta, tani waxay ka dhigeysaa mid ka sareysa.
Waan ka xumahay laakiin waxa ku saabsan ninkaas oo ah nin fandroid ah, oo si kadis ah marwalba isbarbardhig u sameeyo marka Samsung cusubi soo baxdo ama ay had iyo jeer guuleystaan.
Waxay ahayd mid aad u cad, furitaanka S7 waa mid aan laga gudbi karin, 6S-na wuxuu ku yaraaday iftiin yar.
Haa, Samsung waxay qaadi doontaa sawirro aad ufiican sidii lafilayay laakiin anigu ma aaminsani in caruusadda sanduuqa ama isdabajooga, aysan macquul aheyn in 6da qof ay sawiradaas qaadaan.
AppStore iyo iTunes USA ma aysan shaqeynin maalmo »wax aan macquul aheyn in lagu xiro iTunes / AppStore» wax faallooyin ah ama war ah oo ku saabsan tan?
Waxaan ku arkay dib u eegisyo dhowr ah YouTube ,,, waxaanan inta badan dib u eegaa iPhone-ka, waxaan rajaynayaa Apple inay hilib saarto dabka, maxaa yeelay hal dareemayaal oo ka hooseeya S6 ayayna ku guuleysteen inay ka dhigaan mid culus oo waxaan sawiray fadeexad!
aan aragno tufaaxa uu ka sameeyo arrintaas
hooyo sawiradaas 6da ah waxay u egyihiin 3g waligey kuma arkin sawiro sidan u xun oo iphone ka ah 3g
Ku jawaab Danny Rivas
Ma jiraan wax la yaab leh, dareeraha ayaa ka fiican, markaa waxay kaliya u hartay in la arko waxa 7 na tusayo hadda, si fiican uma maleynayo inay lagama maarmaan tahay in lagu qasbo sawirada xun ee iPhone si loo muujiyo meel ka baxsan fanboys-yada aysan xiiseyneynin wax kasta oo ka badan in la yiraahdo wax kasta oo aan iPhone ahayn waa qashin, inteenna inteena kale waynu ka warqabnaa furfurnaantaas iyo tikniyoolajiyadda cusub ee ay soo geliyeen, waxay ahayd wax iska cad in laga guuleysan lahaa laakiin intii aan doonayay inaan qaato sawir sida fool xun sida qaar ay dhigaan, ma aanan awoodin.
Ku taabo jikada 2, ciyaarta karinta ee loogu talagalay carruurta barnaamijka usbuuca